Nohavaozina: Ara-dalàna ve ny vokatra Delta 8 THC any amin'ny fanjakako?
Saul Meshach, mpanoratra
Nahazo vaovao farany momba ny fanavaozam-baovao izahay fa noraran'ny fanjakan'i Nevada ny varotra sy ny fizarana ireo vokatra Delta 8 THC. Azonao atao ny manantena ny fanjakana maro kokoa izay nanao ara-dalàna ny marijuana fialamboly mba hanao toy izany mba hiarovana ny tsy ara-dalàna RACKET TAX. Tsy mbola nambara tamin'ny vaovao izany. ity no taratasy nalefa tamiko avy amin'ny iray amin'ireo mpiara-miasa amiko.
Nandà tsy hanao tsy ara-dalàna ny Delta 8 THC ny mpanao lalàna Texas
Delta-8 THC dia ara-dalàna any amin'ny ankamaroan'ny fanjakana, nametraka fandrarana na fameperana ny fanjakana sasany. Ity ny fampahalalana vaovao indrindra natolotray an'i Red Emperor CBD. Anjaranao ny manaraka ny lalàm-panjakana rehetra fa hatrany amin'ny Delta Federaly Ara-dalàna 8 -THC dia 100% isan-jato ara-dalàna noho ny volavolan-dalàna Trump Farm an'ny taona 2018 izay nanao ara-dalàna ny CBD sy ireo singa rehetra an'ny zavamaniry. Azafady mba ampio hampiely ny vaovao momba ny Delta-8 THC indrindra any amin'ny fanjakana mbola tsy ara-dalàna. Vao avy nanome lehilahy mainty hoditra izy ireo ny herinandro lasa teo tany am-ponja tsy nisy an'i Parole tany Mississippi noho ny fananany rongony 1 grama. Jereo: https://nypost.com/2021/05/13/court-upholds-life-sentence-for-man-convicted-of-marijuana-possession/
Ny vitsy an'isa dia mbola voasambotra ary omena firaketana heloka bevava izay mijanona ao amin'ny firaketana azy mandritra ny androm-piainany any amin'ny fanjakana sasany ary ny sasany kosa mivarotra malalaka amina miliara maro. Afaka manampy amin'ny fanajanonana izao tsy rariny izao isika.
Ity misy lisitr'ireo fanjakana izay manana fandrarana zero na Famerana
Delta 8 THC ara-dalàna araka ny fanjakana
Delta 8 Ara-dalàna tanteraka
Ara-dalàna ny fialamboly
Alabama Eny No
Alaska No Eny
Arizona No Eny
California Eny Eny
Colorado No Eny
Connecticut Eny Eny
Mitandrema No Eny
District de Columbia Eny Eny
Florida Eny No
Georgia Eny No
Hawaii Eny Eny
Illinois Eny Eny
Indiana Eny No
Kansas Eny No
Louisiana Eny No
Maine Eny Eny
Maryland Eny Eny
Massachusetts Eny Eny
Michigan Eny Eny
Minnesota Eny No
Mississippi Eny No
Missouri Eny No
Montana No Eny
Nebraska Eny No
Nevada Tsy misy fanavaozana 6/30/21 Eny
New Hamshire Eny No
New Jersey Eny Eny
New Mexico Eny No
New York Voafetra voafetra Eny
North Carolina Eny No
North Dakota Eny No
Ohio Eny No
Oklahoma Eny Eny
Oregon Eny Eny
Pennslyvania Eny No
Rhode Islandy No Eny
South Carolina Eny No
South Dakota Eny No
Tennesee Eny No
Texas Eny No
Vermont No Eny
Virginia Eny No
Washington Eny Advisory ihany Eny
Wisconsin Eny No
Wyoming Eny No
Delta-8 THC no lasa vokatra mafana indrindra nivarotra hemp izay nanjary ara-dalàna tamin'ny volavolan-dalàna momba ny fambolena tamin'ny taona 2018, ary mazava ho azy fa mihamaro hatrany ny fanjakana manandrana mandrara azy io. Ny ampahany mahagaga dia be ny fanjakana milaza fa ny rongony ara-dalàna dia mandrara ny vokatra Delta 8. Ny antony? Manapaka ny hetra tsy ara-dalàna rehetra azon'izy ireo amin'ny tompona orinasa. Hitanao fa fanitsakitsahana ny zon'ny lalàm-panorenanay ny fandoavan-ketra amin'ny zava-mahadomelina faha-1 satria miaiky heloka bevava federaly ianao. Raha ny marina, raha mivarotra marijuana mihoatra ny 20 tapitrisa dolara Delta THC 9 ianao dia afaka mamono anao ny governemanta amerikana eo ambanin'ny Lalàn'i Ping Federal. JEREO NY Fandrobana hetra marobe. Ny Emperora Mena dia namorona sarintany manasongadina ny fanjakana Delta-8 izay ara-dalàna na voafetra izao.
Delta-8 THC izay voajanahary voajanahary cannabinoid ary avy amin'ny zavamaniry hemp ary nekena ho ara-dalàna tamin'ny volavolan-dalàna momba ny Farm Farm 2018 nataon'i Donald Trump. Satria ny ankamaroan'ny sarety Delta 8 sy vokatra hafa eny an-tsena dia somary voahodina ary tsy alaina. Delta-8 THC dia novaina avy amin'ny CBD, izany dingana izany sy ny psychoactive ary ny fahamamoana dia nahatonga ny fanjakana sasany hanandrana hametraka ny fandraràna amin'ny vokatra.
Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fivarotana CBD maro any amin'ny Fanjakana izay fivarotana rongony rongony tsy ara-dalàna dia mivarotra Delta 8 THC Products ao amin'ny magazay CBD eny fa na dia ao anaty magazay aza. Mazava ho azy, hiditra ny DEA ary hiezaka hampitahotra ireo mpandraharaha satria milaza fa ao amin'ny Orange Book izany. Tsikaritrareo fa tsy nilaza izy ireo hoe SHIT momba ny marijuana tsy ara-dalàna izay nafindra tany California, Washington, Colorado, ary fanjakana maro hafa. Heveriko manokana fa mifehy ny ankamaroan'ny dispensaries ara-dalàna ny DEA. Tsy hitanao ve izany hoe ODD fa misy agents DEA hiditra ao amin'ny tsenan'i Marijuana toy ny efa lasa ara-dalàna raha toa ka mandroaka ny olom-pirenena ao anaty tranom-borona miaraka amin'ireo mpanolana olona sy mpametaveta ankizy herintaona talohan'izay? Mamofona karazan-trondro ho ahy sa ahoana?
Toa DUMB sahala amin'ny Google [Danny The Worlds's dondral Sntich] izy sa ahoana? Watson?
Tsikaritrao fa tsy IRAY Amin'ny iray tapitrisa dolara isam-bolana ny Dispensaries ara-dalàna dia mampiasa ireo tombony rehetra ireo hamoahana ireo gadra avy am-ponja noho ny fivarotana rongony. Izahay eto amin'ny Emperora Mena Manangona dia manome 20 isan-jaton'ny tombom-barotra rehetra amin'ny raharaha ara-dalàna izay inoantsika fa vitsy an'isa ary mahazo FAHASALAMANA SY FANOMPOANA TSY FAHAROA noho ny fampidirana am-ponja raha amidin'ny olom-pirenena amerikana hafa amina miliara isam-bolana. Izany koa dia fanitsakitsahana miharihary ny zon'ny lalàm-panorenana miaro mitovy ny lalàna.
Amin'izao fotoana izao, ny Delta-8 dia voarara na voafetra any Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Delaware, Kentucky, Idaho, Iowa, Montana, New York, Rhode Island, Utah, Vermont, ary Washington (Advisory Only). Ny fameperana dia tsy mety misy vokatra vape na delt8 azo esorina fa ny siligaoma malefaka sy menaka manitra tsara dia tsara, ka alaivo antoka fa hanamarina ny lalànao momba ny fanjakana sy ny eo an-toerana ianao, hanavao ity pejy ity izahay isaky ny misy zavatra miova.
Ny fandrarana ny lalàna sy ny fanazavana ny lalàna mifehy dia dinihina any amin'ny fanjakana hafa ankehitriny toa an'i Oregon, Michigan, North Dakota, Oklahoma, ary Illinois.
Vao namoaka lalàna i Alabama mba hanilihana ny Delta 8 tsy ara-dalàna hanampiana ireo tantsaha hemp. Ka azonao atao ny manova an'io fanjakana io ho MAITRE.
Raha tsy nila antony hafa iray ianao hilaza amin'ny namanao momba ny Delta 8 THC, dia maka an-keriny zazakely any Alabama izy ireo izay misy ny 8% isan-jaton'ny Delta 100 THC. Raha mifoka ny vokatray izay notsapaina sy nasiana marika fahatelo izy ireo dia apetaka aminy mihitsy aza ny tanany, avelao izy hitondra ny zanany. https://www.al.com/crime/2021/06/alabama-removes-toddler-from-michigan-family-found-with-marijuana.html?outputType=amp
Azonao atao ny manantena fanjakana maro kokoa handrara azy ireo ary afaka manantena fanamby ara-dalàna bebe kokoa ianao indrindra amin'ireo fanjakana izay efa manana dispensaries fialamboly ary tsy maniry ny Delta 8 hanapaka ny vola azony amin'ny hetra tsy ara-dalàna. Mametraka lalàna ny Demokraty rehefa miteny izahay mba hanara-dalàna ny marijuana amin'ny sehatra federaly ka hadalana ho azy ireo ny manomboka manafika ny Delta 8 indrindra taorian'ny nilazan'izy ireo fa tena tia ny raharaha Black black. Raha tena nikarakara izy ireo dia hamoaka ara-dalàna ny rongony ary navelany hivoaka ny fonja izy ireo noho ny heloka bevava voafitaka noforonin'ny Nixon Administration.
jereo: Ny tantara manaitra ao ambadiky ny fanambaràn'i Nixon momba ny 'Ady amin'ny zava-mahadomelina' tamin'ity andro ity tamin'ny 1971 izay nikendry ireo mainty hoditra sy mpikatroka ady amin'ny ady | American Enterprise Institute - AEI
Ny fonosana mena rehetra an'ny Emperora Mena dia miaraka amina kaody azo ovaina ka tsy afaka misambotra na manenjika any amin'ny fanjakana izay tsy nametraka fandrarana ny mpampihatra lalàna sy mpampanoa lalàna. Afaka manao izany ve ny mpivarotra eo an-toerana ?? Andramo izao amin'ny alàlan'ny finday avo lenta hizaha ny kaody amin'ny sary etsy ambany.
Efa te-hanana ny Dispensary anao ve ianao? Ity ary ny vintana anananao. Manana vidiny marobe sy ambongadiny ihany koa izahay ho an'ny vokatra Delta 8 THC.
Mahazo komisiona 10 isan-jato amin'ny varotra Delta 8 THC rehetra avy amin'ny namanao sy ny naman'ny media sosialy. Alefaso ny mailaka sales@RedemperorCBD.com hisoratra anarana.
Ny vokatra CBD sy Delta 8 THC dia azo amidy amin'ny mpivarotra rehetra. tsy mila fahazoan-dàlana manokana na hetra haba. Raha mitady ianao Delta marobe na ambongadiny 8 THC vokatra azon'ny Network Red Emperor miditra amin'ny toeram-piompiana CBD & Delta 8 THC lehibe indrindra any Etazonia. Azonao atao ny mahita eto ny lisitry ny ambongadiny sy ny vidiny eto.
Vokatra Delta 8 THC marobe
Rohy momba ny loharano: https://journal.cannabislaw.report/buscher-law-delta-8-thc-is-still-legal-despite-the-new-dea-rule/
Vata Vape Delta 10 THC
Delta 8 THC Vape azo ampiasaina | Infinium
Delta 8 THC Cartridge Vape azo | Zorro